Semalt: पप-अप कसरी रोक्ने, अपवादहरू थप्ने, र मोजिला फायरफक्समा समस्या निवारण गर्ने
अर्को लेखमा, म्याक्स बेल, Semalt ग्राहक सफलता प्रबन्धक, तपाइँको Mozilla फायरफक्स ब्राउजरमा पप-अप नियन्त्रण गर्दा के बारे मा जान्नु आवश्यक सबै सेटि explainsहरू व्याख्या गर्दछ।
पप-अपहरू ब्राउजर विन्डोज हुन् जुन स्वचालित रूपमा तपाईंको अनुमति बिना तपाईंको ब्राउजरमा देखा पर्दछ। तिनीहरूले कहिले पनि पूरा स्क्रिन भर्दैनन् र या त हालको पृष्ठको शीर्षमा देखा पर्न सक्छन् वा मुनि पप-अन्डर)। फायरफक्ससँग एक अद्वितीय सुविधा छ जसले उनीहरूको प्रयोगकर्ताहरूलाई पप-अप र पप-अन्डर दुबै नियन्त्रण गर्न अनुमति दिन्छ। यदि तपाईं विकल्प पृष्ठ भ्रमण गर्नुभयो, तपाईं पप-अप ब्लकिocking सुविधा पूर्वनिर्धारित द्वारा सकिएको पाउनुहुनेछ। यदि प्रयोगकर्ताले पहिले फायरफक्स जानकारी पट्टी खारेज गरेको छैन भने, यो कुनै पनि समयमा देखा पर्नेछ ब्राउजरले पप-अप रोक्दछ। अवरुद्ध पप-अप चित्रण गर्ने आइकनले हालको ठेगाना पट्टीमा पनि देखाउँदछ।
साइटमा पप-अप ब्लकि options विकल्पहरू पहुँच गर्न, जानकारी बारबाट विकल्पहरू वा ठेगाना बारमा आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईं निम्नबाट चयन गर्न सक्नुहुन्छ:
हालको साइटमा पप-अपहरूलाई अनुमति दिनुहोस् वा रोक्नुहोस्;
पप-अप अवरोधक विकल्पहरू सम्पादन गर्नुहोस्;
तपाइँलाई अवरुद्ध पप-अपको बारेमा जानकारी दिने सन्देश प्रदर्शन गर्न नखोज्नुहोस्;
अवरुद्ध पप-अपको बारेमा विवरणहरू देखाउनुहोस्;
साइटमा पप-अप रोक्नाले अन्य वेबसाईटहरूमा हस्तक्षेप गर्न सक्दछ। केहि वेबसाइटहरु पप-अप आफ्नो केहि महत्वपूर्ण सुविधाहरु को लागी प्रयोग गर्दछ। यदि तपाईंले तिनीहरूको पप-अप रोक्नुभयो भने, यसले यी सुविधाहरू अक्षम गर्दछ। केहि साइटहरु लाई पप-अप चलाउन को लागी तपाइँ ब्राउजिंग को लागी अनुमति दिन, तपाइँले विशिष्ट वेबसाइटहरु लाई पप-अप देखाउनको लागि अनुमति दिइएको ती सूची थप्नु पर्छ।
पप-अप रोक्न सधैं काम गर्दैन। केहि वेबसाइटहरु लाई अनकवर्ड विधाहरु कसरी प्रयोग गर्ने थाहा छ, जसले फायरफक्सलाई पप-अपहरू रोक्न पनी रोक्नको लागि कडा बनाउनको लागि कठिन बनाउँदछ।
यहाँ पप-अप अवरोधक सेटिंग्समा के अपेक्षा गर्ने हो:
१. पप-अप अवरोधक सेटिंग्स पहुँच गर्दै
शीर्ष-दायाँ कुनामा रहेको मेनू बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र ड्रप-डाउन मेनूबाट विकल्पहरू चयन गर्नुहोस्;
गोपनीयता र सुरक्षा प्यानलमा ट्याप गर्नुहोस्;
अनुमति खण्ड अन्तर्गत ब्लक पप-अप विन्डो अनचेक गर्नुहोस्;
अपवाद ट्याब अन्तर्गत, एउटा नयाँ संवाद विन्डो देखा पर्छ जहाँ तपाईं साइटहरूको सूची इनपुट गर्नुहुन्छ जुन तपाईं अनुमति दिन चाहनुहुन्छ;
संवाद तपाईंलाई प्रोम्प्ट गर्दछ:
अनुमति दिनुहोस्: तपाईंलाई एक अपवाद सूचीमा वेबसाईट थप्न मद्दत गर्दछ;
साइट हटाउनुहोस्: अपवाद सूचीबाट वेबसाइट हटाउन तपाईंलाई सक्षम बनाउँछ;
सबै साइटहरू हटाउनुहोस्: अपवाद सूचीबाट सबै वेबसाइटहरू हटाउँछ;
२. यदि पप-अप ब्लक भइरहेको छैन भने के हुन्छ?
पहिले, जाँच गर्नुहोस् कि पप-अप फायरफक्सबाट आएको हो। पप-अप फायरफक्स ब्राउजरबाट आएको हो कि अवस्थित जानकारी। यदि पप-अप विन्डोमा त्यहाँ सर्कलमा संलग्न विस्मयादिबोधक चिह्नको साथ एक छवि छ, तब पप-अप फायरफक्सबाट हो। यसको अनुपस्थितिको अर्थ यो हो कि तपाईं आफ्नो कम्प्युटरमा मालवेयरको शिकार हुन सक्नुहुन्छ जुन तपाईंको पप-अपको स्रोत हो।
दोस्रो, बहिष्करण सूचीमा साइट थपिएको छ कि छैन जाँच गर्नुहोस्। पप-अप ब्लकि settings सेटिंग्स पहुँच गर्न र अपवाद संवाद बाकस खोल्न प्रक्रियाको अनुसरण गर्नुहोस्। यदि पप-अप पैदा गर्ने वेबसाइट अपवाद सूचीमा छ भने, हटाउने साइटमा क्लिक गर्नुहोस्, र त्यसपछि पृष्ठ बचत गर्नुहोस् र बन्द गर्नुहोस्।
कहिलेकाँही पप-अप विन्डोजहरू फायरफक्सले जानाजानी चाल गर्दछ कि यो पनी काम गर्न आवश्यक साइटहरूको लागि पप-अप रोक्दैन। त्यसकारण, माउस क्लिक गरेर वा कुञ्जी थिचे पछि विन्डो देखिन्छ कि हुँदैन निर्धारण गर्नुहोस्। यदि ती गर्छन्, र पप-अप ब्लकि bl सुविधा सक्रिय छ भने, तपाईं चिन्तित हुनु पर्दैन।
यदि पप-अप विन्डोजहरू विन्डोज जस्तो देखिने गरी डिजाइन गरिएको छ तर वास्तवमै छैन भने, तब फायरफक्स तिनीहरूलाई रोक्न असमर्थ छ।
अन्तमा, यदि एक पप-अप देखिन्छ Mozilla तपाईंलाई सर्वेक्षणGizmo बाट एक सर्वेक्षणमा भाग लिनको लागि आग्रह गरे, यो एक कम्पनी जाँच गरिएको प्रोग्राम हो र फायरफक्सले यसलाई ब्लक गर्दैन।